ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရလွတ်ပလွတ် ဗယ်လင်တိုင်း”
အာတာလွတ် မြို့စားကြီးလဲ ရှိသလေ...
13 Feb 09, 23:26
ုkom: ဂွိ နဲ့ ကိုပေါရဲ့ ဂွိ နဲ့ဘာမှ မဆိုင်ဘူးနော်။ (ဖြေရှင်းသွားသည်။ )
post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။
ကိုပေါကလည်း ကာတွန်းပုံလေးတွေပါ ထဲ့ရမှာ-း)
ဟား ဟား မိုက်တယ် ကိုပေါ
ခုမှ နံမည်နဲ့ လိုက်သွားပြီ..
်အစဉ်အရမ်းမိတဲ့ ရှင်ဂွမ်းဂွိ နဲ့ သမိန်ပေါသွပ်အကြောင်း ပြန်ဖတ်ရတော့ သူငယ်ပြန်.. အဲ့.ငယ်မူပြန်မိပါတယ်..။ အရေးအသားက တကယ်ကောင်းတော့ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏရဲ့ စာသားတွေကို ကူးချထားသလား အထင် wrong မိပါတယ်..။ ကျေးဇူးပါဗျား..။ Happy Valentines Day to Mr. & Mrs. Paw!
သမိန်ပေါသွပ် သည် ကိုပေါဖြစ်၍ ရှင်ဂွမ်းဂွိကား မဒမ်ပေါ ဖြစ်သွားလေသတည်း။
အကြံပိုင် ပုံများကတော့ လူနိုင်ကို ရည်းစားဖြစ်အောင်လုပ်နည်းပေါ့ ဒီနည်းနဲ့ ကြိုးစားအုံးမှ မဒီကညာ တစ်ယောက်ရစေသား ..
ကိုပေတရာလည်း ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဂွိရဲ့ အချစ်ဟောင်းပဲ။
အိုး… ဒီချစ်သူများနေ့ ဗားရှင်းက မိုက်ပါ့…
ဒါနဲ့ ကိုကိုသွပ်နဲ့ အမှန်အကန်ကြီးကို ရီငံနေကြတဲ့ ရွာအရှေ့ ပိုင်းက ဂွက်ထော်ကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။
သွားပြီဗျို့...ဒက်ဂလောက်...ဒက်ဂလောက်.....ဒက်ဂလောက်
“Roses are red, violets are blue, you’ve gotawarrant, and we’d love to see you.”
"we’d love to see you." sounds very romantic. By the way, is it from the lady police or to the woman criminals?